QURXINTA GURIGA SANADKA CUSUB. FIKRADAHA ASAASIGA AH EE NAQSHADDA GURIGA IYO WARAAQAHA WARAAQAHA GURYAHA EE MAGAALADA IYO QURXINTA IFTIINKA - SAMEE NAFTAADA
Maalmo yar oo keliya ayaa weli ku haray Sannadka Cusub, taas oo micnaheedu yahay tiro badan, haddii ay wacan tahay, dadaal. Si aad u doorato geedka kirismaska ​​oo aad u qurxiso, iyada oo aanad illoobin ku saabsan gudaha guriga - shaqada waa mid culus: halkan sidoo kale waxaa jira xeerar iyo mabaadi'da. Waa wakhti aad ku ogaan kartid kuwa.
Dhaqanka qurxinta guriga
Sifooyinka ugu muhiimsan ee fasaxa ee qaabkoodii hore ayaa naga yimid Europe: kala hadlaya geedaha kirismaska, ubaxyada iyo maqaarka.
Cunsurka aadka u qurxinta guriga ee Sanadka Cusub "koray" laga bilaabo qurxinta kirismaska ​​hore.
Xitaa qarniyadii dhexe, miiskii fasaxa waxaa lagu qurxiyey laamood beeh, laakiin qarnigii 16aad ee Jarmalka, cawska iyo geedo yaryar, oo ka dhacay qolka ugu wayn ee guriga, ayaa beddelay.
Waxaa la aaminsan yahay in bilowgii fikraddaani uu ahaa Martin Luther, oo markii ugu horeysay lagu soo koobay geedkii kirismaska ​​ee xiddiga reer Beytlaxam.
Tan iyo markaas dhirta cawsku waxay noqdeen calaamad guud oo ah fasaxyada qaboobaha. Waqti ka dib, dhirkiisa ayaa noqday mid ka sii jilaya - bilawgii qarnigii XIX, qurxinta dhalada, qurxinta iyo qurxinta kartoonka ayaa noqday dad caan ah.
Waxay ahayd muddadaas oo ah in dekada la aasaasay. ubaxyo. Waxyaabaha ugu horreeyay ee noocan oo kale ah waxay u muuqdeen 1839 iyada oo loo marey dadaalkii wadaad u dhashay Lutheran Johann Vihern.
Waxay ahayd gawaaridii hore, oo lagu qurxiyay 24 shamac yar iyo 4 waaweyn. Tiradani waxay la xiriirtaa dhaqanka Protestant - sugitaanka guurka ka hor (jiilka) wuxuu soconayaa 4 asbuuc, iyo sida safarka fasaxa, waxay shumac shidaal kale soo dhigeen.
Waa muhiim! Diyaarinta fasaxyada, dareenka gaarka ah waa in la siiyaa xaalada xadhkaha korontada - ugu yaraan si kooban u fiiri jadwalka una hubi sida garland u shaqeyso.
Dhowr maqaar gaaban ayaa lagu daray shabakadaha, iyo muuqaalka alaabooyinkani waxay ka baxeen fikradda asalka ah - Shumacyada ayaa door ka ciyaaraya qaybta qurxinta. Shaqooyinka iftiinka festigga ah ayaa si tartiib tartiib ah ugu dhaqaaqay gogosha, taas oo bilawgii qarnigii labaatanaadna loo beddelay kuwa korantada ah.
Dhulkeena, Dhirta Sannadka Cusub waxay ku adkeeyeen imtixaanno badan. Fikradda lagu qurxiyo geed qoryo leh ayaa la aqbalay by Peter The Great, laakiin marka la eego xajmigaas wuxuu ku soo dhawaaday dhammaadkii qarnigii 19aad (isagoo ah qayb ka mid ah nolosha raaxada leh). Dabeecadda qarnigii 20aad waxaa lagu calaamadiyay dhowr mamnuuc ah: dhirta waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin diin diimeed, ka dibna waxa loo soo gudbiyey waxyaabo ay ka mid yihiin nolosha burjiyada.
Dhammaadkii 1930skii geedkii kirismaska ​​ahaa ayaa la dayactiray waxayna noqdeen dabeecad qasabka ah ee sannadihii New Year. Sida loogu talagalay ubaxyada, waxay hadda uun bilaabeen in ay ka dhex muuqdaan nala wadaagayaasha, iyo garoomada, kuwaas oo u yaqaan qof walba, sii hayaan booskooda.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad go'aansato waxa midabada loo isticmaali doono qurxinta guriga. Mabaadi'da xulashadooda ma aha mid aad u badan.
Marka ugu horeysa waa inaad diirada saarato midabada ku jirta calaamadda sanadka soo socda. 2018th waxaa lagu qaban doonaa aagagga loo yaqaan 'Yellow Earth Dog Dog'. Sidaa darteed, fursadaha ugu habboon waxay noqon doonaan:
quruxda midabada leh - qurxinta noocaas ah waxaa lagula talinayaa inay isticmaalaan ugu yaraan, iyo sidoo kale leben ama midabyo mugdi ah: waxaa la aaminsan yahay in calaamadda sanadka ay u fiicantahay iyaga, laakiin uma badna inay hoos u dhigto huruud.
Dabcan, qurxinta noocan oo kale ah waa in ay isku xirnaadaan gudaha iyo dibedda guriga. Sidaa darteed, xitaa ka hor intaadan gelin, waa inaad qiyaastaa sida garland ama "roob" ay u eegi doonaan asalka dhuxusha, darbiyada iyo alaabta guriga.
Ma taqaanaa? Dalalka Katooliga, Sanadka Cusub waxaa loo dabaaldegaa isla sida St.
Guryaha ku jira midabyo rinjiga leh, alaabta glitter ayaa ugu haboon. Qurxinta jilicsan ee jilicsan ayaa laga yaabaa inay si fudud u dhacaan (aragti ahaan, dabcan, waxay keenaysaa iftiin adag).
Marka laga hadlaayo hal-abuur, marmarka qaarkood way fududahay in la aqbalo darajada kale - in lagu qurxiyo guri leh qalabka ciyaaraha iyo maqaayadaha ee muuqaal ahaan u dhexgalaan daaqada. Kala soocid doorasho - isticmaalka qurxinta ee midabada sanadaha cusub. Isku darkaasi waa:
caddaan iyo buluug;
caddaan iyo cagaar;
casaan iyo cagaar;
Qaar ka mid ah, fursadaha noocan oo kale ah waxay u muuqdaan kuwo aad u adag oo xakameynaya, laakiin waxay leeyihiin faa'iido fara badan - waxay dhammaantood ku haboon yihiin wax kasta oo hoy ah waxayna ku habboon yihiin tiro yar oo meel walba ah.
Waa muhiim! Qurxiyo buluug ama buluug ah oo lagu dulsaaray laanta yar yar ayaa ku habboon geedaha lacagta.
Farqiga keliya ayaa ku jira qaabeynta qurxinta, iyo sidoo kale lambarkooda - waa in ay ka fekeraan waqtigaan ka hor, maskax ahaan soo bandhigida inta uu le'eg yahay iyo waxa loo jeexi karo diyaaradaha iyo dhinacyada kala duwan.
Maxaa la isticmaali karaa
Ka dib markii ay go'aansadeen su'aasha xulashada midabada, aynu u gudubno dhinaca midka ah ee muhiimka ah ee diyaarinta, kuwaas oo ah waxyaabaha iyo qalabka xoojinaya niyadda Sanadka Cusub.
Laamaha geedka kirismaska
Noocyada cagaarka ah ee kala duwan waxay u noqon karaan aasaaska:
bouquet fasax ah - cirbadaha cagaaran waxay awood u leeyihiin inay noqdaan xarun yar oo ka kooban ka qaybqaadashada ubax ka soo ururinta guryaha, iyo dhowr candhuufyo yar oo dhowaa waxay kor u qaadi doonaan saamaynta xafladaha;
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan waxa dhirta ay ku haboonaan karaan bouquet jiilaalka.
laanta qurxinta - Tani waa hab weyn oo loola jeedo muuqaalka quraaradda, qolka jiifka, jikada ama daraasadda. Laan la leh dhowr farabadan oo ka mid ah alaabta lagu ciyaaro iyo serpentines ayaa fasax u keeni doona geeska ugu muuqda guriga.
qashinka nool - Laga soo bilaabo laanta ku xiran ee aad ku xiran tahay inaad hesho qurux weyn oo leh ur aan caadi ahayn;
ganaaxyo ka yimaada laamood oo yar oo ku xidhan qaanad casaan ah;
qurxinta quruxda (cagaha ugu yar - dabcan, waafaqsan heerarka badbaadada dabka);
kuraasta qurxinta; taarikada iyo suugada;
qurxinta hadiyado hadiyad ahsameynta muuqaal gaar ah.
Ma taqaanaa? Taariikhda ugu horeysa ee New Year waxaa lagu salaamay dadka deggan jasiiradda kirismaska ​​(tani waa qayb ka mid ah jasiiradaha Pacific ee Kiribati) - aagga saacadaha deegaanka waxaa loo qoondeeyey UTC + 14.
Waxyaalaha waraaqaha ah
Arbacada Sannadka Cusub, xayndaabku wuxuu bilaabmayaa kuwa jecel inay sameeyaan naqshado kala duwan oo waraaq ah. Markaad wakhti yar qaadatid, waxaad naftaada samayn kartaa ama meel u gadan kartaa dahabka:
Dabeecadaha barafka ee caadiga ah, kuwaas oo qaab-dhismeedkuna uu ku tiirsan yahay diyaaradda qoraaga;
Meelaha la isku qurxiyo midabada kala duwan ama waraaqo dardar leh oo la adkeeyey;
kubadaha qurxinta ayaa dalbaday. Waxaa habboon in la qaato casaan, buluug ama cagaaran - ku xiran xadhkaha khafiifka ah, waxay u eg yihiin inay xiranyihiin qalabka ciyaaraha ee Christmaska;
kubadaha qaababka malab badan oo midab leh. Qaar badan oo ka mid ah waxaa lagu sameeyaa dabo qabad leh oo leh midab weyn;
taageerayaasha iyo maqaayadaha dhererka iyo midabka;
tirooyinka sanadka cusub ama quruxda quruxda badan, oo laga sameeyay farsamada asalka.
Waa muhiim! Xirfadaha waraaqaha waxay ka soo baxaan garoonada kulul, iyo xitaa shamacyo badan.
Meelaha loogu talagalay duulimaadka waa mid aad u weyn, laakiin xusuusnow dareenka saamiga iyo isudambeeynta qurxinta guriga.
Baraf dabiici ah
Si aad u hesho daboolka noocaas ah, waxaa jira waxyaabo badan oo loo isticmaalo: xumbo jajabiyey, roobab jilicsan, qashin, jellar gaar ah iyo buufin.
Duufkii hore ee la mid ah oo la mid ah barafka kuma haboon yahay gudaha casriga ah waxayna ku haboon tahay qurxinta dibadda.
Kobcinta barafka ayaa sahlan in la sameeyo hab macquul ah. Tusaale ahaan, si aad u hesho duufaan, qabow iyo shucaac, waxaad u baahan tahay kaliya inaad isku dartid 2 baako oo ah rooti ama buraash ka soo dhaqanka isla xumbo xiirto, ma iloobin inaad ku darto dhalaaliye. Si aad ugu raaxaysatid barafka macdanta leh, waxaad u dhaqantaa sida soo socota:
saabuunta saabuunta cad ayaa lagu hayaa qaboojiyaha habeenkii;
subaxdii waxaa lagu suuxay hargab joogta ah;
adoo ku daraya mashiinka yar yar iyo dhalaaliye, waxaad arki doontaa in tiro badan oo soo baxaysa aysan u muuqanaynin oo kaliya wanaagsan, laakiin sidoo kale waa la dhisay - waxaad samayn kartaa tirooyin.
Shaatiinka iyo sticks
Iyada oo la adeegsanayo qoraallada, waxaad ku dabaqi kartaa nidaam ku yaal dabool kasta. Si aad u hesho muuqaal cajiib ah, wakiil midab leh ayaa loo isticmaalaa - sida caadiga ah waa daawada cadayga ama baraf macmal ah.
Ma taqaanaa? Laga bilaabo 1930 ilaa 1947, Janaayo 1 ee USSR waxay ahayd maalin shaqo.
Qalabka dib loo isticmaali karo waxaa loo iibiyaa muraayadaha iyo daaqadaha, iyo sidoo kale qaboojiyeyaasha, taas oo kuu ogolaaneysa inaad tijaabiso qaab. Meelahaas ayaa ah kuwa ugu fudud ee nadiif ah. Sida for stickers, vinyl ugu badan leh - noocyada midabada iyo muuqaalada waa weyn. Waxaa intaa dheer, waxay ku haboon yihiin in lagu dul dhigo wallpaper iyaga oo aan ku buufinaynin, derbiyada rinjika ah, miraayad la taaban karo iyo foornada dhoobada ah, albaabka qaboojiyaha.
Qurxinta qolka waxaa loola jeeda qiyaaso gaar ah oo keena dareen raaxo leh.
Ku soo qaado Sannadka Cusub ee siyaabaha soo socda:
beddel naqshadda midabka, xoojinta xitaa waxyaabo yaryar (tusaale ahaan, shumaca sheyga ama tooyiska);
Isticmaal qurxinta dabiiciga ah - laanta cagaarka ah ama mulkiilaha ama mulkiilaha;
Waxaad xiiseyn doontaa inaad akhrido sida loo qalajiyo liin ama liin si loogu qurxiyo guriga.
ku dheji derbiga derbiga (sida ikhtiyaari - boosteejo boor hore);
haddii aaggu ogolaado, caarad ayaa lagu dhejiyaa geeska: sawirkan si dhakhso ah ayuu u dhigaa niyadda fasaxa.
Dhinaca kale, waxa fiican inaad ka fogaato qoryaha dhalaalaya iyo qalabka ciyaaraha fudud (qolkani waxay eegayaan waxoogaa qariib ah).
Waxaan qurxin karnaa qolka carruurta
Xaaladdan oo kale, wax walba waxaa go'aan ka gaaraya xaqiiqda ku nool qolka.
Sidaas darteed wiilasha gudaha gudaha ee ku haboon ee midabada leh. Fikrad ahaan, tani waa hab loogu talagalay buluuga jiilaalka, kaas oo ku xiran boombalooyinka iyo qashinka gagaarka cas, cagaaran iyo midabada madow.
Laakiin waayo Gabdhaha Muuqaalka Fairytale oo ay sameeyeen quraarado kala duwan, kabaha xariirta iyo dabeecad kale ayaa ka muhiimsan.
Waa muhiim! Waxaad carruurta iskugu xiri kartaa naqshadda qolka - u ogolow inay sawirro jimicsi sameeyaan ama dhisaan qaab fudud oo laamo ah ama laamo ah.
Labbiska dhirta kirismaska, isku day in aad qurxin kartid alaabta caruurta ku ciyaarayso. Ilmaha aan weli haysan da 'da' da 'waxay u egyihiin nalalka iftiinka ee garoonnada iyo iftiinka mooska. Si aan loogu xadgudbin idyll, fiiro gaar ah u yeelo amniga - xannaanadu waxay ka fiicnaanaysaa inaysan isticmaalin tiro badan oo alaabada quraaradaha ah (ama si wadajir ah looga tago). Dabcan, geedka waa in si ammaan ah loo xirxiraa, garashaduna way ka sareysaa.
Goobta soo ururinta ee qoyska oo dhan waxay xoojineysaa qurxinta guud ee guriga. Run, naqshadeeyayaashu ma talinayaan samaynta daaqa aad u qosol badan - midab cad ama midab buluug ah ee miisaanka ayaa awood u yeelanaya halabuurka.
Goob gaar ah ayaa la siiyaa shumacyada - waxaa loo doortaa inay dhadhamiyaan, hase yeeshee, waxay weli yihiin kuwo qurxin, midab leh ama qaab sawir ah.
Ugu dambeyntii waxay helaysaa, adigoo buuxinaya wax caleemo ah, kalooro gaar ah (oo loo heli karo iibka). Suufiyada, dhaadheer, sharaabaadyada iyo isbaarooyinka ayaa gacan ka geysanaya inay shamac sameeyaan sanadka cusub.
Calaamadda sannadka 2018 wuxuu jecel yahay wax kasta oo garaacaya, waana sababta aan u sameyn karno iyada oo aan shamib ahayn. Waxay noqon kartaa mid caadi ah (laga sameeyo biraha) ama qaab dhalo ah oo loo qaabeeyey, kaas oo la dhigo meel u dhow xarunta miiska. Maro dhar ah ayaa suurtagal ah in la dalbado sheekooyin, qurxineynin jibbaarada ama qabsashada.
Dhammaan guryuhu waxay yaqaanaan wax ku saabsan qurxinta suxuunta - suxuunta waxaa loo adeegaa qaab aan caadi ahayn (tusaale ahaan, geedaha kirismaska), oo leh taabasho delicious qaab qaab ama qurux badan.
Ma taqaanaa? Cuntada dhaqameed ee hoosta jilicsanayd waxay u muuqatay nolol maalmeed, taas oo ay ugu mahad celinayaan dadaalka loogu talagalay chefs-ka Norwegian. Dad yar ayaa ogyahay in foomka suunka ah ee suxuunku uu leeyahay qaabka wareegga loo qaybiyey qaybo kala duwan oo midabo leh.
Caddadka ugu weyn wuxuu ku dhacaa geedka. Marka laga reebo qurxinta geedka kirismaska, waxaa lagu dhejin karaa meel kasta: si aad ugu dhajiso dusha sare ee alaabta, si aad u jiifsato oo u hagaajiso qoraalka derbiga, si aad u gashato xuddunta leh qaab arxan leh, iwm. Badanaa waxa loo isticmaalaa hilibka ugu fudud: xariijin iftiin leh ayaa lagu dhejiyaa weel qarsoodi ah oo qarsoodi ah - meelo fantastik ah oo ku yaal darbiyada iyo saqafka ayaa la bixiyaa.
Caadada ah in lagu xiro alaabta lagu ciyaaro ee loo yaqaan 'avoner' ayaa si tartiib tartiib ah u noqonaya wax la soo dhaafay. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in xadhkaha ay haystaan ​​ay tahay in aysan dhalaalin kuleylka iyo inaysan hoos udhicin.
Dhammaan diyaargarowga waa qurxinta dibadda. Tixgeli goobaha muhiimka ah ee arrintan ku saabsan.
Qurxinta albaabada albaabka
Si aad u soo gashid guriga waxa loo beddelay shabakad federe ah, waa ku filan in la xuso mid ka mid ah fikradaha qurxinta:
caleemo-dhaqameed ama qashin-saarid ku-meel-gaar ah oo kaqeybqaadashada qasnadaha cufan;
aragtida guntada ayaa xoojin doonta bootinta hadiyadaha, oo hoosta ku taal;
Saddex garoon oo ah qiyaaso kala duwan, waxaad dhisi kartaa baraf ah inta u dhaxaysa dhamaan dhererka albaabka;
ku dheji shabaqa ubaxa leh ama qurux badan oo midabo leh oo ku yaalla bannaanka dibadda ee albaabka;
barafka iyo waxyaallaha yaryar;
isku dhejinta shixnadaha;
Malaa'igta ka soo jeeda.
Waa muhiim! Wixii soodhaweynta albaabka ah waa mid aad u muhiim ah.
Dhirta kirismaska ​​ee ka sameysan qashinka qubayska waxay u muuqdaan kuwo albaab weyn u muuqda, xitaa rinjiga rinjiga wuxuu u jeexjeexaa madaxa Aabbaha oo leh dhaqdhaqaaqyo dhowr ah.
Laakiin tani kuma koobna - qaar ka mid ah kabaha lagu xiran yahay laamood oo ku yaalla dusha sare.
Windows iyo balakoonka
Barafka caadiga ah ee cabbirrada kala duwan ee kale ayaa sidoo kale dareemay tiknoolijiyada nafsaddooda naftooda.
Markaad aragto muuqaal ku habboon shabakada, oo ku yaala guryaha, geedaha, geela, dabeecadaha caanka ah, waa la daabici karaa oo la gooyaa.
Kuwa aan haysan wakhti ku filan oo ku saabsan wax-qabadka noocaas ah waxay jecel yihiin qori-qorayaasha, meelaha ay ku jiraan daawada cadayga. Fikradda aadka u fiican ayaa ah mid aad u adag in la gaaro, laakiin muuqaal yar oo caqli-gal ah ayaa u muuqda mid taabanaya.
Haddii daaqadu aysan daboolin daahir, alaabta carruurtu ku ciyaarto ama miraha la duldhigay xadhigaha dheeraadka ah waxaa lagu dhejiyaa darbiga. Balakoonka waxaa lagu dari karaa intaa dheer - in laga saaro gawska ama ku dhajiyo geeska sare. Ha ilaawin si loo hubiyo kalsoonida buugan.
Ma taqaanaa? Ciyaaryahankii Jarmalka Dieter Toma dhamaadkii 1999 wuxuu sameeyay boodh gaar ah oo ka soo baxay gadhka gadhka: isagoo xawaare sarre u qaatay daqiiqadihii ugu dambeeyay, cayaartu waxay dhacday sannadka soo socda.
Baraf dabiici ah ayaa lagu shubay daaqadaha, ama alaabta wax lagu duubo ayaa lagu dhejiyaa qaabab guri ama geedo qoryo leh. Saameyntu waxay noqon doontaa mid sii xoogeysaneysa haddii aad kubbada ku dhejisid bartamaha.
Halkan, wax walba waa dhaqan - horyaal si adag ayaa loo qabtaa garlands. Maalmahan, bucshinada LED waxay caan ku yihiin: waxay u dulqaadanayaan barafka iyo qoyaanka. Faa'iido kale waa waxtarka.
Sidoo kale, garafyada ayaa laga sameyn karaa qoryaha lagu xirxiray qoob-ka-shaqeeyayaasha: joogitaankooda wuxuu si fiican u buuxin doonaa nalalka ciriiriga ah.
Dad badan ayaa ku dhajiya tirooyinka iftiinka darbiga, iyo Santa Claus, oo kor u qaada jaranjarada dekada leh ee saqafka u horseeday, waxay noqdeen wax dhab ah.
Qaanno habboon oo ah dhar jilicsan. Laakiin mid ka mid ah qurxintaas waxaa lagu dhigaa meel sare oo sarreeya - tani waxay ka ilaalin doontaa xayawaanka rabaayada ah.
In decoration wuxuu ka qaybqaadan karaa wejiyo dibedda ah, oo lagu qurxiyo laanta iyo qoob-ka-dhiska waxayna udhaqaaqday derbiga.
Geedka shidaalka ah
Ugu dambeyntii, waxa ugu muhiimsan waa xulashada geedka kirismaska, oo noqon doona xarunta dabbaaldegga sanadka cusub.
Dhirta Firfirta waxaa loo yiraahdaa geed-geedeedka ah ee dhirta caadiga ah (cirridka firirku wuxuu leeyahay 40 nooc)
Waxaan kugula talineynaa in aad ku barato qaababka la isku qurxiyo, iyo sidoo kale dhirta buluuga ah, buluug iyo buluug.
Marka la ogaado waxyaalahan, dhoobada iyo geedaha ayaa badanaa la barbar dhigaa, iyo geedo dabiici ah oo dabiiciga ah ayaa sidoo kale inta badan ku xiran khatartaas. Haddii aad is barbardhigto, waxay soo baxday in:
Waxay cuneen Laamuhu waa caanno badan, iyo carafka cirbadaha xoog badan. Miisaanka, waa sahlan, taas oo fududayn doonta gaarsiinta suuqa. Dhibaatooyinka yar yar - cirbado qaro weyn, kuwaas oo horayba u bilaabaan inay u boodaan. Caanood sababtoo ah qiimaha la awoodi karo.
By geed cirbadaha ayaa dheeraada oo aaney aad u adkaan - waa sahlan tahay inaad dhar gashato. Karaashadu sidoo kale waa la joogaa, laakiin geedka noocaas ahi wuxuu u qaadaa meel bannaan, oo aan had iyo jeer ku habboonayn. Dad badan ma jecla dheecaanka badan ee rinjiga. Doorasho wanaagsan oo loogu talagalay qol ballaaran (qol yar ayaa ku dhowaan doona).
Geedka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ma dhaco, waxay u adeegtaa sanado, iyo hab daweyn habboon iyo tobaneeyo sano. Faa'idada ugu weyn ee ay leedahay - ma leh wax urta urta ah.
Waa muhiim! Dhirta dabiiciga ah ee dabiiciga ah waxaa lagu sameeyaa ka qaybqaadashada chloride polyvinyl. Haddii ay dhacdo xadgudub tignoolaji ah, maadadani waxay soo jiidataa xubno ledh ah (taas oo ah, qoryuhu wuxuu halis u yahay caafimaadka).
Kuwa ku fikiraya inay iibsadaan geed nololeedka kirismaska ​​ah waxaa lagula talinayaa in ay taxaddaraan qaar ka mid ah sifooyinka:
Midab. Marka la eego tijaabada caafimaad, waxay noqon doontaa mid isku mid ah.
Cabbirka. Geedka koowaad ee geedka kirismaska ​​ee ballaran aan ka yarayn 1/2 ee dhererkiisa.
Lafaatiirtakuwaas oo soo jiidanaya oo si siman loogu daboolay irbadaha, marka laga reebo waxay yihiin kuwo cufan. Foorida xayiraad iyo dhageysiga qallooca, aad ogtahay - geed ayaa la jaray waqti dheer.
Baaritaan kale - dhowr cirbadood ayaa la xoqay. Haddii urka dabeecadda uu si fiican u maqli karo, mashiinka dhuxulku wuxuu ku yaal gacanta, geedkii waa la qaadi karaa.
Ma taqaanaa? Dalka Shiinaha, 1da Janaayo, waxay isku dayaan inayan isticmaalin mindi: aammin maxalli ah ayaa sheegaya in maalintaas ay nasiib u geli karaan "nasiib".
Marka la eego geed geedo ah oo macmal ah, habka xulashada ayaa ku lug leh shaybaar kale:
Ha ka baqin inaad laashato laamiyada "ka soo horjeeda" iyo waxoogaa yar ee cirbadaha: alaab tayo leh ayaa istaagi doona.
Waa in aysan jirin wax ur ah. Caddaynta balaastigga ayaa cadeyneysa in alaabta ugu jaban la isticmaalo.
Inta badan lafdhabarta laanta, waxay u badantahay in ay aragto alaabta lagu ciyaaro. Isku day inaad isku daydo kubad, waxayna kuu fududaaneysaa inaad doorato.
Чтобы сохранить елку свежей, ствол очищают снизу на 8-10 см, а затем помещают в ведро с водой (в нем растворяют 1 ст. л. сахара, щепотку соли и таблетку аспирина).
Рекомендуем вам подробнее прочитать об украшении елки на Новый год.
Dareer kale ayaa sidoo kale waa mid aad u wanaagsan: aaladda (0.5 tsp) ayaa lagu daraa isla mugga biyaha, 1 tbsp. l gelatin iyo filiqin yar oo jajaban.
Laakiin geedka ayaa ugu dheeraan doona weelka qashinka qoyan oo leh qoyaan nafaqo leh: 1 litir oo biyo ah, aspirin iyo 2 tsp. sonkorta Waxaa sidoo kale wanaagsan inaad si joogto ah u buufisaa laanaha biyo cusub.
Dabcan, waxaad gashaa geedka kirismaska ​​meel caan ah. Marka lagu daro xirmidda nabdoonaanta jirridda, taageerada dambe ayaa sidoo kale door ka ciyaara - adoo geed ka soo horjeeda derbi, waxaad ka ilaalineysaa inuu dhaco. Waxyaabaha kaliya - laamaha waa inaysan kudhicin batariyada iyo ilaha kale ee kuleylka, iyo sidoo kale inay taabtaan fiilooyinka qalabka guryaha. Isboorti, nooc kasta oo ka mid ah noocyada kala duwan iyo midabka, nacnaca, garlands iyo farsamada gacanta ayaa loo isticmaalaa qurxinta geedka kirismaska.
Waa muhiim! Haddii qaybta dufanka ee dhirta ay si cad u muuqato xudduudda madow ee leh dhumucda dhowr mitiritir, waxa fiican in la doorto tusaale ahaan.
Laakin ha ku degdegin inaad jarto dhammaan kaydka dahabka - qalabka noocan oo kale ah waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo quruxda geedka, iyo in aanad u noqonin "haram" ka badan.
Xeerarka qurxinta waxaa lagu yareynayaa tallaabooyinka fudud:
Goobta ugu horeysa ee garland. Habka ugu fudud ee lagu bilaabi karo goobada, markaa alaabta lagu ciyaaro waxaa lagu dhejin karaa amar kasta. Nidaamka isdabajoogu wuxuu u muuqdaa mid muuqaal ahaan u ah qaabab loogu talagalay kabaha iyo kubadaha. Hase yeeshee, xaalad kastoo, garland waxaa laga dhigayaa xagga sare ilaa hoos, oo qarinaya xuddunta.
Cabbirta iyo tirada alaabta lagu ciyaaro waxay u dhigantaa cabbirka iyo midabka geedka.: weyn - ka badan, ka khafiifsan - ka yar. Sidaa darteed, hal mitir iyo hal mitir oo dherer ah qaabka caadiga ah wuxuu ku filnaan doonaa 15-20 kubbadood midabada cagaaran ama casaan.
Xiddig dhaqameed ayaa la dhigayaa meesha sare. ama sawirrada astaamaha ugu muhiimsan ee fasaxa.
Alaabta lagu ciyaaro waxaa hoos loo dhigaa barafka macmalka ah. Xitaa dhejinta caadiga ah ee iftiinka iftiinka wuxuu si weyn u soo saari karaa geedka kirismaska ​​laftiisa iyo gudaha gudaha.
Qurxinta quruxda badan ee ku yaala bartamaha qolka ayaa si siman loo qurxiyey.. Haddii ay ku taal gees, qaybta caanka ah waxay noqon doontaa mudnaan, laakiin ha u ogolaan faa iido.
Inta lagu gudajiro shaqooyinkaas, waxa ugu muhiimsan maaha in la qaato oo la dhajiyo qurxinta, laakiin in la xasuusto dareenka saamiga iyo heerarka nabadgelyada hoose.
Ma taqaanaa? Japanese wuxuu xirxiray geedaha New Year leh xadhkaha ama caws - qaabkan qurxinta waxaa loo yaqaan kadomatsu.
Waxaan bartay waxa mabaadi'da qurxinta guryaha ay ku jiraan dabaaldegga sannadka cusub iyo waxyaabaha ay ku habboon yihiin ujeedadan. Waxaan rajeyneynaa in macluumaadkani uu faa'iido u yeelan doono, gurigana inta lagu jiro fasaxyada ayaa u noqon doona meel ay raaxada u socoto iyo riyooyin kasta oo run ah. Tijaabooyin guul leh!